သည်လ ၁၅ ရက်နေ့ညနေကစပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ လက်ရှိပြေးဆွဲနေတဲ့ ဘတ်စ်ကား အားလုံးရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ပြော – မြန်မာ့သတင်း
ရှာမယ်	ရှာမယ်	သတင်းစုံ သည်လ ၁၅ ရက်နေ့ညနေကစပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ လက်ရှိပြေးဆွဲနေတဲ့ ဘတ်စ်ကား အားလုံးရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ပြော MTD2 weeks agoAdd comment52 views
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ၊ ၆ ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းမှာ လက်ရှိပြေးဆွဲ နေတဲ့ ဘတ်စ်ကား လိုင်းပေါင်း၃၀၀ ကျော်ကို သည်လ ၁၅ ရက်နေ့ညနေကစပြီး ပြေးဆွဲတာ ရပ်နားရမယ်လို့ သည်နေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာ ကျင်းပတဲ့ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောပါတယ်။
မ ထ သ ဗဟို လက်အောက်က ဘတ်စ်ကားတွေကို သည်လ ၁၅ ရက်နေ့ ည ကနေစပြီး နောက်ဆုံးပြေးဆွဲပေးပြီး ၁၆ ရက်နေ့ မနက်ကစပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အာဏာပိုင် အဖွဲ့က စီစဉ်ပေးထားတဲ့ ဘတ်စ်ကားလိုင်း ၅၈ လိုင်းနဲ့ အစားထိုးပြေးဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘတ်စ်ကာူး၅၈ လိုင်းပြေးဆွဲပေးမယ့် လမ်းကြောင်းတွေကို ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်များ၊ လက်ကမ်းစာဆောင်များနဲ့ သတင်းမီဒီယာများနဲ့ အင်တာနက် ဝတ်ဆိုက်တွေမှာကြေငြာပေးသွားမဟ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ နေ့စဉ်ဘတ်စ်ကားစီးနင်းသူဦးရေ သိန်း ၂၀ ခန့်ရှိတယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က သိရပါတယ်။
ကော့သောင်းမြို့ ၊ ပုလုံးတုံတုံးကျေးရွာတွင် အသက်(၁၄) နှစ်အရွယ် မိန်းခလေးအား သားမယားပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
တာမွေမြို့နယ် ကျောက်မြောင်းကြီးရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းရှိ သွားဆေးခန်း တစ်ခုတွင် ပုပ်ပွ သေဆုံးနေသည့် သွားဆရာဝန်အလောင်း တွေ့ရှိ
Add comment	Cancel reply	Comment Name * Email * Website ဒါလေးတွေပါဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ ဗီဒီယို တောသူဆိုတာ တစ်ကယ့်ကိုရိုးတယ် ဘာဘာညာညာတွေလည်းနားမလည် MTD261 views
ဗဟုသုတများသတင်းစုံ The Most Impossible Job on this Earth On January 1 the former prime minister of Portugal Antonio Guterres took the helm as the ninth secretary-general of the United Nations. While the world focuses on US president-elect Donald Trump and his tweets, there is far less attention on the...
သတင်းစုံ Draft law could see men jailed for deceitful promises of marriage Any man who cohabitates with or impregnatesawoman after agreeing to marry her, but then fails to stand by the promise, could soon face prison terms ifadraft law comes into effect. The Prevention of Violence against Women Law includesaclause...